Ndị Mmụọ E Kere Eke—Otú Ha Si Emetụta Anyị - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Costa Rican Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
2 Bible zoro aka n’ebe ndị mmụọ ozi nọ ọtụtụ narị ugboro. Ka anyị tụlee ole na ole n’ime ebe ndị ahụ e zoro aka na ha iji mụtakwuo banyere ndị mmụọ ozi. Olee otú ndị mmụọ ozi si malite? Ndị Kọlọsi 1:16 na-ekwu, sị: “E sitere n’aka ya [Jizọs Kraịst] kee ihe ndị ọzọ nile n’eluigwe na n’elu ụwa.” N’ihi ya, Jehova Chineke sitere n’aka Ọkpara ya kee nke ọ bụla n’ime ndị nile bụ́ mmụọ, bụ́ ndị a na-akpọ ndị mmụọ ozi. Ole ka ndị mmụọ ozi dị? Bible na-egosi na e kere ọtụtụ narị nde ndị mmụọ ozi, ha nile dịchakwa ike.—Abụ Ọma 103:20.*
15 Afọ ole na ole mgbe Ndị Kraịst nọ n’Efesọs bibisịrị akwụkwọ majik ha, Pọl onyeozi deere ha akwụkwọ, sị: “Anyị nwere mgba…megide ìgwè ndị mmụọ ọjọọ.” (Ndị Efesọs 6:12) Ndị mmụọ ọjọọ ahụ ezughị ike. Ha ka nọ na-anwa inwe mmeri. N’ihi ya, olee ihe ọzọ dị mkpa ka Ndị Kraịst ahụ mee? “Karịsịa ihe nile,” ka Pọl kwuru, “burunụ ọta ukwu bụ́ okwukwe, bụ́ nke unu ga-eji nwee ike imenyụ akụ́ ụta nile na-ere ọkụ nke ajọ onye ahụ [Setan].” (Ndị Efesọs 6:16) Ka ọta nke okwukwe anyị na-esiwanye ike, otú ahụ ka anyị ga-enwekwu ike iguzogidesi ìgwè ndị mmụọ ọjọọ ike.—Matiu 17:20.
* Mkpughe 5:11 na-ekwu banyere ndị mmụọ ozi, bụ́ ndị ezi omume, sị: “Ọnụ ọgụgụ ha dịkwa ọtụtụ iri puku ụzọ ọtụtụ iri puku.” N’ihi ya, Bible na-egosi na e kere ọtụtụ narị nde ndị mmụọ ozi eke.